Ezaho fantarina aloha izy, ataovy mangina ny fanadihadianao momba azy : inona ny zavatra tiany sy mahaliana azy ? Aiza ny toerana mety hahitana azy matetika… Efa tombony ho anao ny fahafantarana fa liana aminao koa izy, ka manatona azy rehefa hitanao izy. Efa manana resaka horesahana aminy rahateo ianao amin’izay, satria efa mahalala izay tiany sy mahaliana azy. Mila fahasahiana sy finiavana kely fotsiny sisa.
Misy lehilahy tiako izay any, fa izy miaraka amin’ny namako. Tsy tiany anefa io namako io, fa izaho no tiany. Ilay namako no misisika be hanohy hiaraka aminy foana. Inona no tokony ataoko ?
Matoa izy miaraka amin’io vehivavy io dia misy antony ao, fa raha tena tsy tiany tokoa io dia, na tsy niarahany mihitsy, na efa nisarahany, eny na dia misisika tahaka ny inona aza. Araka izany, tsaratsara kokoa aminao ny tsy mitady ny hiaraka amin’io lehilahy io. Fanajan-tena izany sady fanajana ny fihavanana misy eo aminao sy ilay namanao. Raha tsy zakanao ny mahita azy roa miaraka dia mihataha kely, aza mifanerasera be amin-dry zareo intsony, saingy aza miavonavona kosa na miady aminy. Sady ratsy eo imason’ny olona foana koa izany mpinamana mifandimby olon-tiana izany, ka tsy aleo ve miandry izay ho anjaran’ny tena ?
Manana namana vehivavy ny olona niaraka tamiko. Hafahafa anefa ny fihetsik’ilay vehivavy aminy, ka ninoako fa niaraka ry zareo, nefa ilay olon-tiako nandà izany foana. Nisarahako izy, satria tsy matiko lolo ilay izy. Ilay vehivavy koa niezaka ny nandray ahy ho namana foana. Te hifamerina izahay amin’izao, nefa samy matahotra. Mba omeo vahaolana.
Raha toa ka samy mbola tena tia marina ianareo dia mila mifanatona sy mifampiresaka. Tandremo anefa fa tsy azonao atao ny manakana azy tsy hifanerasera amin’ilay vehivavy iray, raha toa ka tena mpinamana fotsiny marina izy ireo. Tsy maintsy hahay mampandry ny sainao rahateo izy, raha toa ka tena tiany tokoa ny hifamerenanareo. Tokony hazava tsara aminao mihitsy ny tena fifandraisan’izy ireo marina ary ianao kosa, tsy tokony handefa saina lavitra loatra sy ho diso saro-piaro loatra. Aza mora entim-po koa fa manjary tsy hitombina mihitsy ny fiainam-pitiavanao.